जापानले ६० हजार नर्स लैजाने — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > जापानले ६० हजार नर्स लैजाने
जापानले ६० हजार नर्स लैजाने
काठमाडौं । निकै लामो प्रयासपछि सरकारले जापान जाने नेपाली कामदारका लागि लिइने भाषा परीक्षाको मिति र मोडालिटीबारे टुंगो लगाएको छ ।
पहिलो चरणमा नर्स र केयर गिभरका लागि जापान जाने कामदारको भाषा परीक्षा आगामी ११ र १२ कात्तिकमा हुने टुंगो लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जापानले पाँच वर्षको अवधिमा विभिन्न १४ क्षेत्रमा ३ लाख ४० हजार बढी विदेशी कामदार लैजाने नीति अघि सारेको छ । सोही नीतिअनुसार नर्सिङ क्षेत्रमा ६० हजारभन्दा बढी विदेशी कामदार लैजाने उल्लेख गरेको छ । नेपालबाट मात्रै नर्सिङ क्षेत्रमा कति कामदार लैजाने भन्नेबारे अझै यकिन भइसकेको छैन । पहिलो चरणमा नर्सिङ केयरमा मात्रै कामदार लैजाने भए पनि त्यसपछि कृषि, उद्योग, पर्यटन, होटल, रेस्टुरेन्टलगायत १४ क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजाने बताइएको छ ।
जापानले विशिष्ट दक्ष कामदारमध्येबाट पहिलोमा सम्बन्धित काममा दक्षता भएका र उच्च तहको सीप भएका कामदार छनोट गर्ने दुई मुलुकबीच भएको समझदारीमा उल्लेख छ । यसअघि नेपाली कामदार विभिन्न मेनपावर तथा कन्सल्टेन्सीमार्फत रोजगारीका लागि जापान पुग्ने गरेका थिए ।
जापानमा हाल नेपालीले मासिक न्यूनतम ३ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय खाडी राष्ट्रहरूमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण त्यहाँको रोजगार कटौती हुँदै जान थालेपछि सरकारले खाडी मुलुकको विकल्पमा नयाँ रोजगारीको गन्तव्य खोज्ने क्रममा जापानसँग दुईपक्षीय श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको हो ।
२०७६ साउन ३० गते प्रकाशित
२०७६ साउन ३० गते ०७:४९ मा प्रकाशित
३ वर्षदेखि कोइला खानी संचालनमा आउन सकेन
नेकपा प्रवक्ता किन गए चीन ? यस्तो छ कारण !
ताप्लेजुङमा सर्वाधिक धन राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुने
लोकसेवाले भर्खरै निकाल्यो यस्तो सूचना
व्यक्तिगत प्यान लिनेको संख्यामा वृद्धि